Baidoa Media Center » Shariif Xasan oo ku dhawaaqay musharax inuu yahay.
Shariif Xasan oo ku dhawaaqay musharax inuu yahay.
August 12, 2012 - Written by admin - Edited byadmin Gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa xaflad uu ku qabsaday magaalada Muqdisho waxa uu kaga dhawaaqay inuu yahay musharax u taagan xilka madaxweynanimada dalka Soomaaliya.
Shariif Xasan oo ay garba taagnaayeen rag ay kamid ahaayeen gudoomiye kuxigeenkiisii 1aad iyo wasiir kuxigeenkii hore ee arimaha gudaha iyo amniga qaranka Ibraahim Isaaq Yarow ayaa waxa uu ku dhawaaqay inuu yahay musharax madaxweynanimo isaga oo ka dalbaday ummada Soomaaliyeedna inay doortaan.
Horay ayaa waxaa ugu dhawaaqay musharaxnimadooda, madaxweynaha dowlada Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed iyo raisalwasaare Gaas.
One Response to Shariif Xasan oo ku dhawaaqay musharax inuu yahay.
Aden Ibraahim says:	12/08/2012 at 21:55	Shacabka Somaliyed waxaan uga digeynaa ineysan doranin Madaxda TFGda guud ahaan , gaar ahaan XARIIF SAKIIN maxaa yeeley wey ogsoon yihiin waxa ay yihiin iyo danaha ay ka leeyihiin Dawladnimada iyo Maqaamka Siyaasadeed.
Waxaa kaloo jira Xadiith saxiix ah ee uu Rasuulkeyna SSCWS ku yiri ” MU’MINKA IN LABA JEER HAL GOD LAGA QANIINO WAA REEBAN TAHAY” taasoo micnaheedu yahay waa inaan ka taxaddarnaa MUNKARKA iyo kuwa wada , waana nagu waajib inaan la dagallanno sida nalagu farey diinteyna.
Haddaba XARIIF SAKIIN waa nin ku sifoobey DANEYSTENIMO oo aan dan ka lahyn Dal , dad iyo deegaanba, taariikhda ayaa in a bartey shakhsigaan oo ku aad iyo ugu takhassusey XATOOYADA, FITNADA, IYO MUNKARKA kuwaasoo iska dhaafee Somalida xittaa Gaalada iyo Islaamka Caalamka jooga ka yaabisey.
XARIIF XASSAN waa ruuxii ay ka shaqeyn waayeen Dawladihii uu isaga ka ahaa Guddomiyaha Baarlamaanka , Wasiirka Maaliyadda had iyo jeerna abaabuli jirey isku dirkooda, kala geyn tooda si uu uga faa’iideysto dhexdooda, una ahaado Ruuxii aamusnaanta badnaa oo sakiintana hoos ku haystey, kooxdii u timaadana gacmaha ka dhunkan jirey kuna oran jirey Idinkaa Jid leh oo waa idin taageersanahay , sidaasna uu ku soo gaarey ilaa iyo Xilligaan.
Waxaa kaloo intyaas u dheer inuu soo magacawdey, gacan ku rimisna ku soo sameystey Dhaqan Bug ah ee uu ku magacaabey Dhaqanka Digil iyo Mirifle iyo Koox uu wato oo ku magacawdey Guddiyada Xalinta Khilaafaadka iyo kan Farsamadaba oo kulligooda uu ku keensadey Musuq maasuq, Laaluush iyo Qabiil sida ninka la Guddoomiyaha u ah Guddiga Farsamada Mr Xiireey oo ay Qaraabo yihiin una joogo si uu Xariifka ugu soo xulo Cidda dooran lahayd.
Somalidu waa iney ogaataa in XARIIFKANI iyo inta uu wato ay yihiin Dhurwaa ama Waraabe mana daynayaan iney Hilib cunaan , rabaayadna ma galaan, haddii ay ku soo noqdaan Madaxtinimada Dalka , waxey sii kordhin doonaan XATOOYADA, siina xaalufin doonaan kheyraadka yar ee ku harsan Dalka iyagoo sii iibsan doono Badda Somaloiyed inta ka harsan maxaa yeeley waan ognahay Jaziiradaha hadda ay Kenya kaa baareyso batroolka inuu XARIIF XASSAN ahaa ninkii qorshahaas soo dhameeyey , kana saxiixey SHARIIF AF GADUUD, CABDI SHAKUUR IYO IBBI.
Ugu dambeyntii XARIIF XASSAN waa eedeysane lagu soo eedeeyey Xatooyo Hanti Qaran oo ay Kooxda daba galka UNka si cad u soo caddeyeen Jeegagii uu Xadey iyo Xisaabaha uu ku shubtey , eedeyntaas oo weli taagan miyaad rabtaan inaad doorataan XARIIF XASSAN ? KKKKKK Haddii ay taas idinka suurtowdo WALLAAHI BILLAAHI WAXAAD NOQONEYSAAN MUNAAFAQIIN oo ka furtey ILAAHEEY iyo DIINTA ISLAAMKABA, idinkoo ogsoon in MUNAAFAQA uu galaayo qeybra ugu hooseeyso ee NAARTA , Allaha naga bad baaditee, Somaliyey indhahiina wax ku arka, dhegahiinana wax ku maqla.DULMIGANA DIIDA OO LA DAGALLAMA .